ဝက်သားဆလတ်ပူပူလေးစားကောင်းတဲ့ Summit Korea ဆိုင်ငယ်လေးသို့ တခေါက်
19 Jun 2018 . 4:48 PM
ကိုရီးယားစာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာတော့ အရောင်လေးရဲ၊ အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ပုံတွေမြင်တာနဲ့ကို သရေကျလောက်တဲ့ အစားအစာတွေလို့ပဲ မြင်ယောက်မိကြတာမို့လား။ ရန်ကုန်မှာ ကိုရီးယားဆိုင်တွေ လာဖွင့်ကြပြီလဲဆိုရော တကယ့်တကယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစားကြည့်တော့မှ ချိုပေါ့ပေါ့ကြီးဖြစ်နေတာမျိုး၊ ပေါ့ပေါ့စပ်စပ်တွေနဲ့ အာမထိလျှာမထိ ဗိုက်ထဲအရသာရှိရှိ မဝင်သွားတဲ့ဆိုင်တွေမှ အများကြီးပါပဲ။ အစားသမားတွေလည်း ကြုံဖူးကြတယ်ဟုတ်။
အဲ့လို ကိုရီးယားစာကို ဗမာပါးစပ်နဲ့ ပူပူနွေးနွေးအငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ကိုရီးယားရောက်နေသလို စားပွဲဝိုင်းပုလေးတွေမှာ ထိုင်စားရမယ့်ဆိုင်လေးတော့ ဒီနေ့ အခရာရဲ့ အစားတလိုင်းက ရုံးအလုပ်နဲ့ အပြင်သွားရင်း ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။
ဆိုင်ကလေးက လှည်းတန်းစင်တာ ဒုတိယထပ် စက်လှေကားအနောက်ဘက်က ကိုရီးယားရိုးရာဆိုင်လေး။ Summit Korea တဲ့။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး အရသာရှိတဲ့ ကိုရီးယားဆိုင်လေးတွေထဲမှာ သူပါပါတယ်။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းက ရိုးရိုးစားပွဲခုံလေးတွေ။ ညာဘက်ခြမ်းကတော့ ကိုရီးယားနန်းတွင်းမှာထိုင်စားနေရသလို စားပွဲခုံပုလေးတွေနဲ့ ပုဆစ်တုပ်ထိုင်ရတာ နန်းဆန်တယ်ဆိုရမယ်။
ကိုယ့်မှာ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ မီနူးကြည့်လိုက်တဲ့ ခန ဈေးနှုန်းအနေအထားကို တော်တော်သဘောကျသွားတယ်။ ကိုရီးယားစာတွေက ဈေးကြီးတတ်ကြတယ်မလား။ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ကျောင်းသား၊ ဝန်ထမ်းတွေ စားပျော်မယ့်ဈေးမျိုးပါ။ ၃,၄ယောက်စားလို့ရတဲ့ အိုးတွေ၊ ပွဲတွေဆိုလည်း သက်သာတယ်။
ကိုယ်ကတော့ နေ့လည်စာစားချိန် ဗိုက်ဆာနေတော့ ဝက်ချစ်သူမို့ ဝက်သားမြေအိုးပူ Set တစ်ပွဲမှာလိုက်တယ်။ သိပ်မကြာဘူးရောက်ချလာတာ။ ပန်းကန်လုံး၊ ပန်းကန်ပြားကြီးငယ်အသွယ်သွယ်နဲ့ မြေအိုးပြားလေးပေါ်မှာ အငွေ့တထောင်းထောင်းဝက်သားပြားရဲရဲလေးတွေ၊ အာလူးအချိုချက်လေးရယ်၊ မြေပဲပြုတ်ကြော်လေးရယ်၊ ကိုရီးယားကင်ချီ၊ ပဲငပိ၊ ဆလတ်ရွက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ထမင်းပူပူလေးတစ်ပန်းကန် စုံနေအောင် ရောက်ချလာပါရောလား။
ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့ ပထမဆုံး ထမင်းကစမြည်းလိုက်တယ်။ ထမင်းကတော့ ရိုးရိုးဆန်ပါပဲ။ ရှမ်းဆန်မဟုတ်တော့ မစေးနေဘူး။ ဒါပေမယ့်ဆန်ကောင်းတယ်။ ပူပူလေး။ နောက်ထပ်မြည်းကြည့်တာ ဝက်သားပြား ပူပူရဲရဲ။ မြေအိုးပူပေါ်တင်ချက်ထားတော့ အရသာပိုထူးကဲတယ်။ သူ့အနံ့က နှာခေါင်းထဲ မွှေးပြီးလှိုက်တက်လာတယ်။ အသားပြားတွေကြီးတယ်။ တခြားဆိုင်တွေလို အသားသေးသေးမစင်းထားလို့ အမြင်မှာ နည်းတယ် ထင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်စားတဲ့သူဆို ၂ယောက်လောက် တခြားအမယ်တွေမှာရင်း စုစားလို့ရတယ်။
အရသာလေးကတော့ ချိုမွှေးပြီး ဂျင်းနံ့လေးသင်းနေတာ။ ဝက်အသားက အိနေတာပဲ။ အဲ့အသားကို ဆလတ်လေးထုတ်၊ ပဲငပိလေးတင်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်း တစ်ပြားစီထည့်၊ ကင်ချီလေးညှပ်ရင်း ပါးစပ်ထဲ အလိပ်လိုက်ပြီး သွင်းပြီး ဝါးပါလိမ့် အကုန်ရောထားတဲ့ ဝက်သားဆလတ်အရသာလေးက ထိရှနေရော။
ငရုတ်သီးစိမ်းလေး အတောင့်ကြီးပေမယ့် စပ်တယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ လှီးထားတာ ကြီးတယ်။ ကျန်တာကတော့ အာလူးချက်နဲ့ မြေပဲပြုတ်ကြော်ကအစ စားကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုး။
အဲ့တစ် Set လုံးကိုမှ ၅၀၀၀ ဆိုတာ ပျော်ပျော်ကြီး ပေးတန်တယ်ထင်တာပါပဲ။
ကိုယ်ကတော့ ဗိုက်ဆာနေချိန် တစ်ယောက်တည်း ၂ပွဲ၊ ၃ပွဲစားဖို့ ဟန်ပြင်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ပွဲနဲ့တင် ဗိုက်တင်းကားခဲ့လို့ တခြားအစားအစာတွေ Menu ကိုပုံလေးရိုက်ခဲ့ပေးပါတယ်။ တစ်ခုတော်တော်သဘောကျတာက ဝန်ထမ်းကောင်မလေးတွေပါပဲ။ သဘောကောင်းတယ်။ သေချာရှင်းပြတယ်။
နောက် ကိုရီးယားစာကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီးဆိုင်နဲ့မတူတာက ကင်ချီ၊ ဆလတ်၊ ပဲငါးပိ ကုန်သွားလည်း ထပ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်။ အဝစားရတယ်။ ခြုံငုံပြောရရင် စိတ်ကျေနပ်စရာပါပဲ။
တခြားဝိုင်းတွေ လူမပြတ်တာရော၊ မြိန်ရှည်ရှက်ရေစားနေကြတာရော ကြည့်ရရင် အရသာနဲ့ပက်သတ်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ အအေးဘူးတွေတော့ပုံမှန်ဆိုင်တွေထက်ကို ဈေးကြီးတယ် ခံစားရတယ်။
လှည်းတန်းနဲ့အနီးတဝိုက်မှာနေတဲ့သူတွေ ကိုရီးယားစာကောင်းကောင်းကို ဗမာပါးစပ်နဲ့ အကိုက် အရသာရှိရှိလေးစားချင်ရင်တော့ ၃,၄ယောက်လောက်စု အမယ် ၄,၅မျိုး မှာစားခဲ့ကြည့်ကြပြီး အခရာကိုလည်း အရသာပြန်ဝေမျှပေးပါဦးလို့….
ဝကျသားဆလတျပူပူလေးစားကောငျးတဲ့ Summit Korea ဆိုငျငယျလေးသို့ တခေါကျ
ကိုရီးယားစာဆိုရငျ ရုပျရှငျကားတှထေဲမှာတော့ အရောငျလေးရဲ၊ အငှတေ့ထောငျးထောငျးနဲ့ ပုံတှမွေငျတာနဲ့ကို သရကေလြောကျတဲ့ အစားအစာတှလေို့ပဲ မွငျယောကျမိကွတာမို့လား။ ရနျကုနျမှာ ကိုရီးယားဆိုငျတှေ လာဖှငျ့ကွပွီလဲဆိုရော တကယျ့တကယျ ကိုယျတိုငျကိုယျကစြားကွညျ့တော့မှ ခြိုပေါ့ပေါ့ကွီးဖွဈနတောမြိုး၊ ပေါ့ပေါ့စပျစပျတှနေဲ့ အာမထိလြှာမထိ ဗိုကျထဲအရသာရှိရှိ မဝငျသှားတဲ့ဆိုငျတှမှေ အမြားကွီးပါပဲ။ အစားသမားတှလေညျး ကွုံဖူးကွတယျဟုတျ။
အဲ့လို ကိုရီးယားစာကို ဗမာပါးစပျနဲ့ ပူပူနှေးနှေးအငှတေ့ထောငျးထောငျးနဲ့ ကိုရီးယားရောကျနသေလို စားပှဲဝိုငျးပုလေးတှမှော ထိုငျစားရမယျ့ဆိုငျလေးတော့ ဒီနေ့ အခရာရဲ့ အစားတလိုငျးက ရုံးအလုပျနဲ့ အပွငျသှားရငျး ရောကျခဲ့တယျပေါ့နျော။
ဆိုငျကလေးက လှညျးတနျးစငျတာ ဒုတိယထပျ စကျလှကေားအနောကျဘကျက ကိုရီးယားရိုးရာဆိုငျလေး။ Summit Korea တဲ့။ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး အရသာရှိတဲ့ ကိုရီးယားဆိုငျလေးတှထေဲမှာ သူပါပါတယျ။
ဘယျဘကျခွမျးက ရိုးရိုးစားပှဲခုံလေးတှေ။ ညာဘကျခွမျးကတော့ ကိုရီးယားနနျးတှငျးမှာထိုငျစားနရေသလို စားပှဲခုံပုလေးတှနေဲ့ ပုဆဈတုပျထိုငျရတာ နနျးဆနျတယျဆိုရမယျ။
ကိုယျ့မှာ ဗိုကျဆာဆာနဲ့ မီနူးကွညျ့လိုကျတဲ့ ခန ဈေးနှုနျးအနအေထားကို တျောတျောသဘောကသြှားတယျ။ ကိုရီးယားစာတှကေ ဈေးကွီးတတျကွတယျမလား။ ဒီဆိုငျလေးကတော့ ကြောငျးသား၊ ဝနျထမျးတှေ စားပြျောမယျ့ဈေးမြိုးပါ။ ၃,၄ယောကျစားလို့ရတဲ့ အိုးတှေ၊ ပှဲတှဆေိုလညျး သကျသာတယျ။
ကိုယျကတော့ နလေ့ညျစာစားခြိနျ ဗိုကျဆာနတေော့ ဝကျခဈြသူမို့ ဝကျသားမွအေိုးပူ Set တဈပှဲမှာလိုကျတယျ။ သိပျမကွာဘူးရောကျခလြာတာ။ ပနျးကနျလုံး၊ ပနျးကနျပွားကွီးငယျအသှယျသှယျနဲ့ မွအေိုးပွားလေးပျေါမှာ အငှတေ့ထောငျးထောငျးဝကျသားပွားရဲရဲလေးတှေ၊ အာလူးအခြိုခကျြလေးရယျ၊ မွပေဲပွုတျကွျောလေးရယျ၊ ကိုရီးယားကငျခြီ၊ ပဲငပိ၊ ဆလတျရှကျ၊ ငရုတျသီးစိမျး၊ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ထမငျးပူပူလေးတဈပနျးကနျ စုံနအေောငျ ရောကျခလြာပါရောလား။
ဗိုကျဆာနတောနဲ့ ပထမဆုံး ထမငျးကစမွညျးလိုကျတယျ။ ထမငျးကတော့ ရိုးရိုးဆနျပါပဲ။ ရှမျးဆနျမဟုတျတော့ မစေးနဘေူး။ ဒါပမေယျ့ဆနျကောငျးတယျ။ ပူပူလေး။ နောကျထပျမွညျးကွညျ့တာ ဝကျသားပွား ပူပူရဲရဲ။ မွအေိုးပူပျေါတငျခကျြထားတော့ အရသာပိုထူးကဲတယျ။ သူ့အနံ့က နှာခေါငျးထဲ မှေးပွီးလှိုကျတကျလာတယျ။ အသားပွားတှကွေီးတယျ။ တခွားဆိုငျတှလေို အသားသေးသေးမစငျးထားလို့ အမွငျမှာ နညျးတယျ ထငျရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပုံမှနျစားတဲ့သူဆို ၂ယောကျလောကျ တခွားအမယျတှမှောရငျး စုစားလို့ရတယျ။
အရသာလေးကတော့ ခြိုမှေးပွီး ဂငျြးနံ့လေးသငျးနတော။ ဝကျအသားက အိနတောပဲ။ အဲ့အသားကို ဆလတျလေးထုတျ၊ ပဲငပိလေးတငျ၊ ကွကျသှနျဖွူ ငရုတျသီးစိမျး တဈပွားစီထညျ့၊ ကငျခြီလေးညှပျရငျး ပါးစပျထဲ အလိပျလိုကျပွီး သှငျးပွီး ဝါးပါလိမျ့ အကုနျရောထားတဲ့ ဝကျသားဆလတျအရသာလေးက ထိရှနရေော။
ငရုတျသီးစိမျးလေး အတောငျ့ကွီးပမေယျ့ စပျတယျ။ ကွကျသှနျဖွူ လှီးထားတာ ကွီးတယျ။ ကနျြတာကတော့ အာလူးခကျြနဲ့ မွပေဲပွုတျကွျောကအစ စားကောငျးတယျဆိုတာမြိုး။
အဲ့တဈ Set လုံးကိုမှ ၅၀၀၀ ဆိုတာ ပြျောပြျောကွီး ပေးတနျတယျထငျတာပါပဲ။
ကိုယျကတော့ ဗိုကျဆာနခြေိနျ တဈယောကျတညျး ၂ပှဲ၊ ၃ပှဲစားဖို့ ဟနျပွငျခဲ့ပမေယျ့ တဈပှဲနဲ့တငျ ဗိုကျတငျးကားခဲ့လို့ တခွားအစားအစာတှေ Menu ကိုပုံလေးရိုကျခဲ့ပေးပါတယျ။ တဈခုတျောတျောသဘောကတြာက ဝနျထမျးကောငျမလေးတှပေါပဲ။ သဘောကောငျးတယျ။ သခြောရှငျးပွတယျ။
နောကျ ကိုရီးယားစာကောငျးတဲ့ နာမညျကွီးဆိုငျနဲ့မတူတာက ကငျခြီ၊ ဆလတျ၊ ပဲငါးပိ ကုနျသှားလညျး ထပျဝနျဆောငျမှုပေးတယျ။ အဝစားရတယျ။ ခွုံငုံပွောရရငျ စိတျကနြေပျစရာပါပဲ။
တခွားဝိုငျးတှေ လူမပွတျတာရော၊ မွိနျရှညျရှကျရစေားနကွေတာရော ကွညျ့ရရငျ အရသာနဲ့ပကျသတျပွီး စိတျခရြတဲ့ဆိုငျလေးပါ။ အအေးဘူးတှတေော့ပုံမှနျဆိုငျတှထေကျကို ဈေးကွီးတယျ ခံစားရတယျ။
လှညျးတနျးနဲ့အနီးတဝိုကျမှာနတေဲ့သူတှေ ကိုရီးယားစာကောငျးကောငျးကို ဗမာပါးစပျနဲ့ အကိုကျ အရသာရှိရှိလေးစားခငျြရငျတော့ ၃,၄ယောကျလောကျစု အမယျ ၄,၅မြိုး မှာစားခဲ့ကွညျ့ကွပွီး အခရာကိုလညျး အရသာပွနျဝမြှေပေးပါဦးလို့….